Ciidamado katirsan ilaalada madaxtooyada Puntland oo tababar loo soo xiray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamado katirsan ilaalada madaxtooyada Puntland oo tababar loo soo xiray
Ciidamado katirsan ilaalada madaxtooyada Puntland oo tababar loo soo xiray
September 22, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo shahaado guddoonsiinaya mid kamid ah askarta dhammaystay tababarka. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa maanta oo Axad tababar u soo xiray ciidamo.
Ciidamada oo katirsan ilaalada madaxtooyada Puntland oo tiradoodu tahay 250 askari ayaa muddo sideed bilood ah tababar ku qaadanayay xerada ciidamada 54-aad ee kutaala magaalada Garoowe.
Madaxweyne ku xigeenka oo ka hadlayay xiritaanka tababarka waxa uu faray taliyaha ciidamada in kor loo qaado tababarka ciidamada.
“Waxaan faraynaa oo kula dardaarmayaa taliyaha guud ee ciidanka Daraashiishta in tababarka ciidanka la joogteeyo oo la dedejiyo xeryahooda iyo rugaha ciidanka.” Ayuu yiri.
Puntland oo cambaaraysay is-hortaaga socdaal ee lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka cusub ee waxbarashada Soomaaliya Cabduqaadir Cali Xaashi ayaa maanta xilka la wareegay. Munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday xafiiska Raysulwasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay saraakiil dowlada katirsan oo uu kamid [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dadka ku dhimatay qaraxyadii ismiidaamiinta ahaa ee ka dhacay Muqdisho Jimcadii ayaa gaartay 39 qof, sida ay sheegeen ciidamada booliiska. Qaraxyada oo ka koobnaa saddex gaari ayaa labo kamid ah lala beegsaday [...]